‘छोरी बचाऔं, छोरी पढाऔं’ अभियान सार्थक भएको छ’ – Nepal Press
२०७८ असार ३१ गते १५:२४
मधेसका गाउँमा अहिले पनि छोरीलाई हेँला गर्ने, भ्रुणमै हत्या गर्ने, नपढाउने र सानै उमेरमा विवाह गराइदिने, जन्म दर्ता नगराउनेलगायतका धेरै समस्या छन् । भारतसँग सीमा जोडिएको कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकामा पनि यस्ता धेरै समस्या छन् । यिनै समस्यालाई कम गर्न पालिकाले पहिलो छोरी जन्माउनेलाई बैंक खातामा १५ हजार राखिदिने गरी ‘छोरी बचाऔं, छोरी पढाऔं’ नारा अगाडि ल्याएको छ । उक्त योजना, गाउँपालिकाको समीक्षा र आगामी योजनाका विषयमा पालिका अध्यक्ष गोपालबहादुर थापासँग नेपाल प्रेसका लागि रामप्रसाद आचार्यले गरेको कुराकानी ।
‘छोरी बचाऔं, छोरी पढाऔं’ अभियान ल्याउनुभयो ? किन आवश्यक देख्नुभयो ?
शिक्षाकोे गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि विज्ञ समेतको सहभागितामा तालिम सञ्चालन गरेका थियौं । अहिले कोभिड—१९ को कारणले गर्दा त्यस्तो गर्न सकिएका छैनौं । तर पनि हामीले समय–समयमा प्रधानाध्यापक शिक्षकहरुसँग छलफल, विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग परामर्श, गाउँ शिक्षा समितिको बैठक बस्ने गरी कार्य गरेका छौं ।
स्वास्थ्य संस्थाबाट सहज ढंगले सेवा पुगोस् भनेर स्वास्थ्यकर्मीसँग छलफल मिडिया र वडा–वडामा पुगेर सचेतना गराएका छौंैं । कोभिड—१९ को विषयमा नागरिकहरुलाई सचेत बनाएका छौं । हामीले सचेतनामूलक काम गर्दै आएका छौं ।
नागरिकले संघीयताको महशसुस गरेका छन् ?
संघीयतापश्चात बनेका तीनै तहका सरकारले गरेको काम विगतको भन्दा धेरै परिणाममा निस्किसकेको छ । जुन—जुन जनताका आधारभूत आवश्यकता र पूर्वाधारका क्षेत्रमा देखिसकेका छन् ।
प्रकाशित: २०७८ असार ३१ गते १५:२४